Ololaha maalmaha caafimaadka caruurta oo lagu soo gabagabeeyay gobollada Puntland. – Radio Daljir
Ololaha maalmaha caafimaadka caruurta oo lagu soo gabagabeeyay gobollada Puntland.
Luulyo 27, 2011 12:00 b 0
Garowe, July 27 – Waxaa guud ahaan-ba lasoo gabagabeeyay, hawl-galkii ololaha maal-maha caafimaadka caruurta, kasoo muddooyinkii danbe ka socdey magaalooyinka iyo dhulka miyiga ah ee Puntland.
Wasiirka wasaarada caafimaadka Puntland ayaa sheegey in inka-badan 40,000 oo carruur ah ay ka faa’iideysteen ololaha talaalka. Talaalkan ayaa Puntland ka socday intii u dhexeeysay sanadkii 2010-ilaa sanadkaan 2011.
Inkasta oo guud ahaan olalaha tallaalku ku soo dhamaaday guul ayaa haddana sida ay sheegayaan saraakiisha wasaaradda caafimaadku waxa ay sheegayaan in ay jireen cabaqado ka hor-yimid, koox-hawleed-kii loo igmadey fulinta mashruucaan sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka Puntland.
Aragtiyo kala duwan oo uu Radio Daljir kasoo aruuriyay dadweynaha qaar-kood waxay ku muujiyeen faa?iidada bulshada u leeyahay talaalku. Inkastoo ay jiraan dad-badan oo aamin-san talaalku inuusan dan u aheyn caruurta.
Hawl-gallada ku saabsan ololaha caafimaadka oo soo-maray marxalado kala duwan, ayaa haatan waxaa muuqda iney soo wanaagsanaaneyso fahanka bulshada ee faa?iidada talaalka.
Daljir Garowe http://daljir.com/
Abaaraha ka taagan koonfurta Soomaaliya oo saamayn ku yeeshay suuqyada iyo dalabka dalagga ee Puntland.
Taliska bilayska Puntland oo sheegay in ay ka walwalsan yihiin kororka dadka muhaajiriinta ah ee soo galaya Puntland.